पञ्चायती शासन उग्र भएको समय थियो। सरकार संरक्षित सामन्तहरूमाथि सशस्त्र कारबाही र शासन विरोधी गतिविधि हुन थालेपछि कम्युनिष्ट युवाहरूलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालिएको थियो। कतिलाई हत्या पनि गरिएको थियो।
यस्ता कुरा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का झापा समाचारदाता रामचन्द्र पोख्रेल थाहा पाउँथे। किनकि, उनी तनहुँका नेपाली कांग्रेसका खाँटी नेता गोवर्द्धन पोख्रेलका जेठा छोरा थिए। रामचन्द्र राजनीति सुँघ्न सक्थे, तर राससमा छउञ्जेल कांग्रेसको राजनीति कहिल्यै मिसाएनन्। कम्युनिष्ट पार्टीको त्यत्रो रक्तपातपूर्ण आन्दोलन हुँदा समेत सरुवा पनि मागेनन्।
तत्कालीन समयमा झापा जिल्ला कम्युनिष्ट विचारधाराको प्रभावमा परेको थियो। यसको कारण थियो, त्यहाँ भूमिपतिहरूले किसानहरूको चरम शोषण गरिरहेका थिए। मरेको मान्छेको ल्याप्चे गराएर जग्गा हत्याउनेसम्मको किर्ते हुने रे ! त्यसै कारण मरेपछि जमीनमा गाड्ने चलन भएका किसानले बाबु मरेपछि हातका औंला चिरेर मात्र गाड्थे रे ! यो हदसम्मको शोषण विरुद्ध कम्युनिष्ट विचारधारा फक्रिंदै र आक्रामक हुँदै गएको थियो।